Horudhac: Real Madrid vs Atletico Madrid… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Madrid Derby) – Gool FM
Horudhac: Real Madrid vs Atletico Madrid… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Madrid Derby)
Haaruun December 12, 2020
(Madrid) 12 Dis 2020. Mid ka mid ah kulamada sida weyn loo sugayo ee horyaalka La Liga ayaa ka dhici doona garoonka Alfredo Di Stefano caawa oo Sabti ah, iyadoo Real Madrid ay soo dhaweyn doonto kooxda ay ku xafiiltamaan caasimadda Spain ee Atletico Madrid.
Kooxda martida loo yahay ayaa haatan ku jirta kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka La Liga, iyagoo lix dhibcood ka hooseeya kooxda hoggaanka haysa ee Atletico oo iyaguna kulan gacanta ku haysa, iyadoo kooxda Tababare Diego Simeone ay si fiican ku bilaabatay xilli ciyaareedkan 2020-21.
Tartanka: Spain – La Liga
Taariikhda: Sabti 12 Dis 2020
Garoonka: Alfredo Di Stefano
Garsooraha: Antonio Mateu (Spain)
Dani Carvajal ayaa taam u noqon kara inuu ku bilowdo safka hore kulanka caawa ee Madrid Derby oo ay kooxdiisu soo dhoweynayso Atletico Madrid.
Sidaas darteed Lucas Vazquez waa in laga soo bixiyaa garabka midig ee difaaca isla markaana la keenaa garabka midig ee weerarka kooxda martida loo yahay kaddib qaab ciyaareed aad u fiican oo uu dhawaan soo bandhigay.
Vinicius Jr ayaa la filayaa inuu ku soo bilaaban doono garabka bidix ee kooxda martida loo yahay, iyadoo Eden Hazard uu weli garoommada uga maqnaanayo dhaawac soo gaaray isbuuc kale ama wax ka badan.
Luis Suarez ayaa la filayaa inuu safka weerarka ee kooxda Atletico Madrid la hoggaamiyo Joao Felix, maadaama Diego Simeone uu buuxin karo daafaca isla markaana uu doonayo inuu ku dhaqaaqo miiska kala sarreynta.
Yannick Carrasco iyo Kieran Trippier ayaa laga yaabaa inay u ciyaaraan garbaha daafaca, inkastoo Renan Lodi uu sidoo kale ku riixi karo inuu ku soo bilowdo isla doorkaan.
Kaddib Bandhigyadii xoogganaa ee uu sameeyay dhowaanahan Mario Hermoso ayaa laga yaabaa in la arko in xiddigii hore ee Real Madrid inuu noqdo daafaca saddexaad ee dhexe isbuucaan.
>- Kooxda Atletico Madrid ayaan la garaacin 26-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka La Liga.
>- Atletico Madrid ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay siddeed ka mid ah sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Kooxda Real Madrid ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Atletico Madrid tartammada oo dhan.
>- Labo ka mid ah saddexdoodii is-arag ee ugu dambeeyey labadan kooxood ayaa ku dhammaaday barbaro.
>- Kooxda martida loo yahay ayaan laga badinin siddeedii kulan ee ugu danbeeyay oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Kooxahan ayaan labada dhinac goolal iska dhalin saddexdoodii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wada ciyaareen.
>- Kooxda martida loo yahay ayaa guuleysatay saddex ka mid ah shantii guul ee ugu dambeysay oo ay labadan dhinac kala gaareen.
>- Kulankoodii ugu dambeeyey ee labadan kooxood dhexmara waxaa 1-0 ku adkaatay kooxda Los Blancos.
Horudhac: Everton vs Chelsea... (Blues oo rikoor wanaagsan ka heysata marka ay la ciyaareyso macallimiinteedii hore)
Weeraryahanka Kooxda AC Milan ee Zlatan Ibrahimovic: "Waan ciyaari doonaa illaa..."